विवाह गरेको २ वर्ष पछि श्रीमान चिनाएकी राखि सावन्तले किन भनिन्, ‘हामीले हाम्रो बाटो फेरि अलग गर्नुपर्छ’ – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/विवाह गरेको २ वर्ष पछि श्रीमान चिनाएकी राखि सावन्तले किन भनिन्, ‘हामीले हाम्रो बाटो फेरि अलग गर्नुपर्छ’
एजेन्सी । टिभीको सबैभन्दा ठूलो रियालिटी शो बिग बोस राखी सावन्तको जीवनमा धेरै अर्थ राख्छ। राखीलाई व्यावसायिक रूपमा समर्थन गर्नुका साथै यो शोले उनको व्यक्तिगत स म्ब न्ध सुधार्ने अवसर पनि दिएको छ । बिग बोसमा नै राखीले आफ्ना पतिको बारेमा धेरै चकित पार्ने खुलासा गरेकी थिइन् र बिग बोसमा नै राखीले पहिलो पटक आफ्नो पतिको बारेमा सबैलाई परिचय गराएकी थिइन् । अब बिग बोस १५ को अन्तिम हप्तामा राखी सावन्त फेरि एकपटक आफ्नो विवाहलाई लिएर भावुक देखिएकी छिन् ।
राखी सावन्तले किन ल्याइन् पतिलाई बिग बोस १५ मा ?
निर्माताहरूले शोको अन्तिम हप्तामा एउटा सानो नाटक थप्न दुई आरजेहरूलाई आमन्त्रित गरे। आरजेले परिवारका सबै सदस्यहरूलाई तीखो प्रश्नहरू गरे। यसै क्रममा उनले राखीलाई सोधे कि उनले आफ्नो पतिलाई सबैको अगाडि ल्याउन किन बिग बोस रोजिन् ? यससँगै उनले राखी कानुनी रूपमा रितेशकी श्रीमती हुन् ? भन्ने प्रश्न पनि गरे ।
राखीले सबै प्रश्नको खुलेर जवाफ दिँदै भनिन्, ‘जब म बीबी १४ मा आएर मैले विवाहित छु भनेर भनें, कसैले पत्याएनन् । म धेरै रोएँ, मसँगै मेरो श्रीमान्, आमा र रितेशको परिवार पनि रोए । मेरो श्रीमान्ले भारत आएर मुम्बईमा साथीहरूको लागि रिसेप्शन आयोजना गर्ने र विवाहको घोषणा गर्ने बताए। तर मैले उनलाई रोकेँ र त्यतिबेला मलाई बिग बोसको प्रस्ताव आयो, जुन मेरो लागि सबै कुरा हो। त्यसपछि मैले बिग बोसमा घोषणा गर्ने निर्णय गरें कि म विवाहित छु र यो मेरो पति हो। यो शो निकै लोकप्रिय छ र यसलाई विश्वभरका मानिसहरूले हेर्छन्।
राखीले श्रीमानको बैंक ब्यालेन्स देखेपछि उनीसँग बिहे गरेको हो भनेकी थिइन् । राखीले थप भनिन्, ‘म रितेशसँग दया चाहन्न । यदि उनीहरुलाई लाग्छ कि म राम्रो मान्छे हुँ र उनीहरुको मायाको हकदार छु भने मात्र यो स म्ब न्धलाई अगाडि बढाउ । मलाई दया होइन, म पत्नीको रूपमा मेरो अधिकार चाहन्छु।
राखी र रितेशले कानुनी रूपमा विवाह गरेका छैनन्
राखीले आफू र रितेशले कानुनी रूपमा विवाह नगरेको बताइन् । अभिनेत्रीले थप भनिन्( रितेशले मलाई विवाहको प्रमाणपत्र दिनु पर्छ। यदि उनले दिए भने, म मेरो बाँकी जीवन उनीसँग हुन तयार छु। तर यदि उसले मलाई विवाहको प्रमाणपत्र दिन सकेन भने यो स म्ब न्ध लाई अगाडि बढाउन सक्छु भन्ने मलाई लाग्दैन । हामीले हाम्रो बाटो फेरि अलग गर्नुपर्छ।
“रवी लामिछानेले दिए कडा दनक, सबै पार्टी छोडेर बालेेेन लाई, समर्थन गरि बाटोखाली गर्न आग्रह ।
अब पेट्रोलको नयाँ मुल्य १ सय ८२ रुपैयाँ ८१ पैसा पर्न सक्ने